Perfume: The Story ofaMurderer (2006) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 7.5/10 231926 votes
Alan Rickman, Ben Whishaw, David Calder, Dustin Hoffman, Jessica Schwarz, John Hurt, Karoline Herfurth, Rachel Hurd-Wood, Sian Thomas, Simon Chandler
ဟိုးအရငျတုနျးက ဆငျးရဲနှမျးပါးတဲ့ မွို့နယျလေးရဲ့ဈေးလေးတဈခုမှာ ငါးစမျးသညျမတဈဟာ
ကိုယျဝနျ အရငျ့မာကွီးနဲ့ဈေးရောငျးနေ ရာမှာ ခလေးမှေးခဲ့ပါတယျ …အခငျြးကို ဓါးနဲ့ကိုယျတိုငျဖွတျပွီး
ခလေးကိုခြောငျထိုးထားခဲ့ပါတယျ ပုတျပှနတေဲ့ငါးညှီတှကွေားမှာခလေးက အသကျရှငျလကျြရှိပါတယျ ..
ဈေးဝယျလာတဲ့သူတှေ ခလေးငိုသံကိုကွားပွီး ခလေးကိုတှတေော့ သူအမကေ ထှကျပွေးတဲ့ အခြိနျမှာ
ကွိုးဆှဲခသြဒေဏျပေးခံရပါတယျ …ခလေးကွီးလာတဲ့ အခြိနျမှာ မိနျးခလေးတှလေိုကျသတျပွီး ထှကျလာတဲ့ခြှေးကနပေနျးတှနေဲ့ပေါငျးပွီး ရမှေေးထုပျလုပျလာခဲပါတယျ.. ရမှေေးရဲ့အစှမျးအငျ အခဈြကိုဖွဈပျေါစပေါတယျ….
ဟိုးအရင်တုန်းက ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မြို့နယ်လေးရဲ့ဈေးလေးတစ်ခုမှာ ငါးစမ်းသည်မတစ်ဟာ
ကိုယ်ဝန် အရင့်မာကြီးနဲ့ဈေးရောင်းနေ ရာမှာ ခလေးမွေးခဲ့ပါတယ် …အချင်းကို ဓါးနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ပြီး
ခလေးကိုချောင်ထိုးထားခဲ့ပါတယ် ပုတ်ပွနေတဲ့ငါးညှီတွေကြားမှာခလေးက အသက်ရှင်လျက်ရှိပါတယ် ..
ဈေးဝယ်လာတဲ့သူတွေ ခလေးငိုသံကိုကြားပြီး ခလေးကိုတွေတော့ သူအမေက ထွက်ပြေးတဲ့ အချိန်မှာ
ကြိုးဆွဲချသေဒဏ်ပေးခံရပါတယ် …ခလေးကြီးလာတဲ့ အချိန်မှာ မိန်းခလေးတွေလိုက်သတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ချွေးကနေပန်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ရေမွေးထုပ်လုပ်လာခဲပါတယ်.. ရေမွှေးရဲ့အစွမ်းအင် အချစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်….
Sebastian Fahr Sergi Ruiz Tom Tykwer Ulrike Schürhoff Xavier Bernabeu
Alan Rickman Ben Whishaw David Calder Dustin Hoffman Jessica Schwarz John Hurt Karoline Herfurth Rachel Hurd-Wood Sian Thomas Simon Chandler
Alan Rickman Albert Pérez Alvaro Roque Andrés Herrera Anna Diogene Anna Gelman Ariadna Cabrol Artur Sala Ben Whishaw Berta Ros Birgit Minichmayr Bridget McConnell Carlos Gramaje Carolina Vera Catherine Boisgontier Corinna Harfouch Cristina Solà David Calder Derek Smee Dora Romano Duna Jové Dustin Hoffman Enric Arquimbau Fermí Reixach Francesc Albiol Francesca Piñón Franck Lefeuvre Gonzalo Cunill Guillermo Ayesa Harris Gordon Jan Cortes Jaume Montané Jerome Willis Jessica Schwarz Joan Serrats Joanna Griffiths John Hurt Karoline Herfurth Laura Gelman Laura Vidal Traver Maia Jenkinson Michael Smiley Montserrat Maso Nico Baixas Núria Casas Oriol Tramvia Paul Berrondo Perry Millward Rachel Hurd-Wood Ramón Pujol Reg Wilson Richard Collins-Moore Richard Felix Roger Salvany Sam Douglas Sara Forestier Sian Thomas Simon Chandler Thomas Lenox Timothy Davies Toby Harper Walter Cots
Option 1 storage.msubmovie.com 688 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 688 MB SD (480p)
Option3server.mfile.cloud 688 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 688 MB SD (480p)
Option5storage.msubmovie.com 1.7 GB HD (1080p)
Option6server.mfile.cloud 1.7 GB HD (1080p)
Option7sharer.pw 1.7 GB HD (1080p)
Option 8 yuudrive.me 1.7 GB HD (1080p)
Option9storage.msubmovie.com4GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 10 server.mfile.cloud4GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 11 yuudrive.me4GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 12 sharer.pw4GB FHD (1080p) DTS 5.1